स्वास्थ्य बिमाप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण कति ? - Ratopati
स्वास्थ्य बिमाप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण कति ?
इलाम-शान्तिडाँडाका उमेश गौतम छोराको खुट्टा भाँचिएर जिल्ला बाहिरको अस्पताल जानुपर्ने भयो ।
उनले स्वास्थ्य बिमा गरेका थिए ।
पैसाको अभाव भइरहेको अवस्थामा जिल्ला बाहिर उपचार गर्न उनलाई समस्या भइरहेको थियो ।
उनले छोरालाई उपचारका लागि झापाको बिएन्डसी अस्पतालतिर लगे । त्यति बेला उहाँलाई लागेको थियो कि बिमा एउटा हल्ला मात्र हो उपचारको खर्च गोजीबाट नै तिर्न पर्छ । जब उनी उपचारका लागि अस्पताल पुगे तब मात्र थाहा भयो कि–स्वास्थ्य बिमाको फाइदा । रु ५० हजारसम्मको सेवा निःशुल्क पाएपछि आफूलाई धेरै ठूलो राहत मिलेको उनले बताए ।
स्वास्थ्य बिमाले गर्दा ठूलो आर्थिक भारबाट जोगियो, गौतमले भने ।
देउमाई नगरपालिकाका रामचन्द्र भट्टराईलाई पनि खुट्टाको क्यान्सरको उपचारका लागि खर्च जुटाउन समस्या परिरहेका बेला स्वास्थ्य बिमा गरेकाले उपचारमा ठूलो सहयोग मिलेको सुनाउनुभयो । समयमै बिमा गरेकोमा खुसी मान्दै उनले भने “बिमाबाट धेरै ठूलो सहयोग पाइयो । मलाई त रु ५० हजारभन्दा पनि ठूलो सहयोग मिलेको महसुस भएको छ ।” गौतम र भट्टराई प्रतिनिधि पात्र हुन् ।
इलाममा स्वास्थ्य बिमा गर्ने अधिकांशले थोरै रकमले पाउन सकिने स्वास्थ्य बिमाबाट धेरै फाइदा भएको बताउँछन् । २०७३ असार १५ गतेबाट इलाममा बिमा कार्यक्रम लागू भएको हो । सबै वर्गका नेपाली नागरिकलाई सुलभ र सहजरूपमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने उद्देश्यले बीमा कार्यक्रम ल्याएको हो ।
सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट थोरै रकमले उपचारमा धेरै राहत मिलेको उपचारकै लागि इलाम अस्पताल आउनुभएका तुलाराम पौडेल बताउँछन् ।
“उपचारका लागि कसैले पनि पैसा राखेको हँुदैन । बिमा गरिराख्दा समस्यामा परेका बेला ठूलो आर्थिक भारबाट बचिँदो रहेछ” उनी भन्छन् , “साथीहरूले बिमा गर्नुपर्छ भनेकाले लहैलहैमा त्यसै गरेको थिएँ, बिमा गर्नु त राम्रो काम पो रहेछ ।”
रु दुई हजार ५०० वार्षिक रूपमा तिरेपछि पाँच जनाको परिवारको रु ५० हजारसम्मको उपचार निःशुल्क हुने गरी सरकारले बिमा कार्यक्रम ल्याएको हो । पाँच जनाभन्दा बढी परिवार सङ्ख्याका लागि थप प्रतिव्यक्ति रु ४२५ बुझाउनुपर्ने बिमा कार्यक्रमको प्रावधान छ । सुरूमा बिमा गर्न केही बुझेका नागरिक मात्र आउने गरे पनि पछिल्लो समय तुलनात्मक बिमा कार्यक्रमबारे सर्वसाधारणको चासो ह्वात्तै बढेको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समिति जिल्ला कार्यालय इलामका दर्ता अधिकारी खेमराज अधिकारी बताउँछन् “गाउँ–गाउँमा अझै पनि बिमाको प्रभाव धेरै परेको छ, धेरैले बिमाबाट स्वास्थ्य लाभ समेत लिनुभयो ।”
बिमा कार्यक्रम विपन्न नागरिकका लागि राम्रो कार्यक्रम हो । यसको सदस्य बनेर, सेवाका बारे जानकारी लिएर आउँदा सहज हुन्छ । इलाम अस्पतालका अनुसार अहिलेसम्ममा इलाम अस्पतालबाट दुई हजार आठ जनाले बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत निःशुल्क सेवा लिइसकेका छन् ।
हालसम्ममा चार हजार ५२३ जना पुरुष र पाँच हजार १०४ जना महिला गरी कुल नौ हजार ६२७ जनाले स्वास्थ्य बिमा गरेका छन् ।
जिल्लाका चार वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, झापाका बिएन्डसी, आम्दा, मेची अञ्चल अस्पताल, कोसी अञ्चल अस्पतालगायतमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
अधिकारीले बिमा कार्यक्रममा नगरका बासिन्दाभन्दा गाउँका बासिन्दाको चासो बढी देखिएको बबताए ।